Deynta Amaahda Canshuurta Deynta Ardayda - Amjambo Africa
Deynta Amaahda Canshuurta Deynta Ardayda
Sida lagu sheegay warbixin 2019 oo uu soo saaray Machadka Helitaanka Kulliyadda iyo Guusha, celcelis ahaan ardayda ka qalin jabisay kuliyadda Maine waxaa lagu lahaa $ 32,600 amaahda ardayda sanadkii hore. In kasta oo tacliinta sare kaa caawin karto inaad horumariso xirfaddaada, ma ahan wax qarsoodi ah in kharashku uu noqon karo caqabad adag oo laga gudbo. Haddii aad tahay arday jaamacadeed doonaya ama haddii aad horay u qalin jabisay, waxaa jira barnaamijyo ka mid ah barnaamijyada gargaarka amaahda ardayda oo kaa caawin kara.
Halkan Maine, waxaa ku jira deyn canshuur ah oo loogu talagalay ardayda ku nool kana shaqeeya gobolka ka dib qalin jabinta. Sumcadda Canshuurta Fursadda Waxbarasho ee Maine (oo badanaa loogu yeero Fursadda Maine) waxay bixisaa dhibco lagu sheegan karo canshuur celinta gobolka. Waxay kuxirantahay sanadka aad kasoo qalin jabisay koleejka, waxaad heli doontaa waxtarro kaladuwan.
Ardayda ka qalin jabisay illaa iyo 2008 way xaq u leeyihiin, laakiin ma heli doonaan faa’iidooyin la mid ah kii dhowaan qalin jabiyay. Tan iyo 2016, ardayda qalin jabisay waxay xaq u leeyihiin ilaa $ 77 bishiiba shahaadada jaamacadeed; illaa $ 367 bishiiba shahaadada koowaad ee jaamacadda; iyo illaa $ 338 bishiiba shahaadada qalin-jabinta. Haddii aad ka qalin jabisay shahaadada koowaad ee jaamacadda sanadkii hore oo hadda aad ku nooshahay oo aad ka shaqeyso Maine, waxaad arki kartaa deynta ugu badan oo ah $ 4,404.
Qaabka amaahda loo adeegsado waxay kuxirantahay tan weyn. Kuwa aan ahayn STEM ee waaweyn (sayniska, tikniyoolajiyadda, injineernimada, ama xisaabta), amaahda canshuurtu waxay kajawaabi doontaa wax kasta oo lagugu leeyahay Gobolka Maine ee canshuuraha. Tusaale ahaan, haddii aad bixisay $ 2,000 amaahda ardayda sanadkii hore, laakiin gobolka lagugu leeyahay $ 2,500 oo canshuuro ah, waxaad ku lahaan doontaa oo keliya gobolka $ 500 ka dib marka deynta la dabaqo.
Haddii amaahda canshuurtu ay ka qiimo badan tahay waxa lagugu leeyahay gobolka ee canshuuraha, deyn kasta oo aadan isticmaali karin waa la hayaa oo lala wareegi karaa illaa 10 sano. Haddii aad tahay STEM weyn, amaahda canshuurta waxaa loo tixgeliyaa inay tahay wax la soo celin karo – taasoo la micno ah ka dib markii lagu dabaqo canshuurta dakhligaaga, oo aad bixisay canshuurahaaga, waxaad ku heli doontaa jeeg boostada ah ama waxaad heli doontaa deebaaji toos ah deynta hadhay.
Waxaa muhiim ah in la xasuusto inta aad xaq u leedahay ilaa $ 367 dib ugu soo laabo bil kasta shahaadada bachelorka, ma heli doontid qaddarkaas deyn haddii aad bixinayso lacag-bixinno hoose. Haddii aad bixinayso $ 200 bishii deynta ardayda, waxaad ku heli doontaa kuwan soo socda deyn ahaan.$ 200 x 12 (bilood) = $ 2,400. Haddii aad bixinayso $ 400 bishii deynta ardayda, taas oo ka sarreysa xadka amaahda, waxaad heli doontaa kuwan soo socda ee deyn $ 367 x 12 (bilood) = $ 4,404. Haddii aad tahay qof weyn oo ‘STEM’ ah oo lacagahaaguna ay ka hooseeyaan lambarka amaahda ugu badan, asal ahaan waa lagaa cafiyey dhammaan deyntaada. Waa inaad bixisaa lacagaha bil kasta, laakiin lacagta ayaa lagugu soo celin doonaa ka dib markii aad xareyso canshuuraha gobolkaaga.
Si aad uga hesho faa’iidooyinka Fursadda Maine, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso xaashida shaqada ee Fursadda Canshuur Fursad Waxbarasho marka aad xareyneyso canshuur celintaada Maine. Waxaad ka heli kartaa xaashida shaqada labada fursadmaine.org iyo maine.gov. Iyada oo ay weheliso warqadda shaqada, waxaad si fudud u soo gudbineysaa qoraal rasmi ah, caddeynta amaahda, iyo caddeynta bixinta amaahda. Fursadda Maine waa barnaamij dhiirrigelin gaar ah oo loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo kuwa haysta shahaadooyinka inay ku noolaadaan oo ka shaqeeyaan halkan Maine. Wax kastoo muhiim kuu ahba ha ahaadee, waa barnaamij aad u faa iido badan deynta amaahda ardayda iyo waqtiga yar ee ay ku qaadato in lagu dhammaystiro xaashida shaqada inta lagu jiro xilliga canshuurta ayaa kaa badbaadin karta kumanaan. Si aad u ogaato amaahda ugu badan ee la heli karo sanadka aad qalin jabisay, ama faahfaahin dheeraad ah, booqo fursadmaine.org ama opportunitymaine.org
PreviousMaalgelinta waxbarashada sare
NextQaramada Midoobay ayaa sheegtay in tilaabooyinka loo qaaday dhanka bogsashada qaran ee Koonfurta Suudaan aysan ku filneyn